Anigu waxaan ku jiraa Senses
Waxa miyir la’aanta leh ayaa ah I.
WAAN KU JIRA
WAAN BILAAHI KARNAA oo aan maqalno waxna maqalnaa oo aragnaa oo dareemnaa; waxaan ku nool nahay dareenka, waxaan ula dhaqmeynaa dareenka, waxaan ka fikirnaa dareenka oo inta badan waxaan isku aqoonsanaa nafsadda dareenka, laakiin sida caadiga ah kama jawaabno asal ahaan dareenkeenna, ama sida degenaanshuhu ugu nool yahay. Waxaan ku silcinaa oo ku raaxeysanahay, dadaalnaa oo u adeegnaa addoomo si aan u quudinno oo u dherginno dareenka; Waxaan ka fikirnaa oo aan qorsheyneynaa oo aan ka shaqeynaa gaarista gaaritaanka himilooyinkeena annaga oo aan ogeyn in himilooyinkan ay dhammaantood ku xiran yihiin dareenka iyo inaan annaga u adeegno. Waxaan abuurnaa ujeedooyin ku saleysan fahamka xasaasiga ah. Fikraduhu waxay noqdaan sanamyo waxaanuna nahay sanam caabudayaal. Diinteennu waa diin ka mid ah dareemayaasha, dareenka ilaahyadeena. Waxaan u abuurnaa ama u xulanaa ilaahnimadeenna sida ku xusan tixgelinta dareenkeenna. Waxaan ku siinay astaamaha caqliga, oo waxaan ku cibaadeysanahay cibaado xagga astaamaha dareenkeena. Waxaan nahay dad wax bartay oo ku barbaaray sida ku xusan awoodayada iyo iftiinka da'da aan ku nool nahay; laakiin dhaqankeenna iyo waxbarashadeena waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo qadarinta iyo u sujuudida dareenkeenna qaab farshaxanimo iyo qurux leh, iyo hababka sayniska. Cilmigayagu waa sayniska dareenka. Waxaan isku dayeynaa inaan tusno in fikradaha ay yihiin qaabab xasaasi ah isla markaana tirooyinku ay yihiin tirooyin loo abuuray ku habboonaanta tirinta iyo in loo istcimaalo helitaanka raaxada iyo ku raaxeysiga dareenka da'da aan ku nool nahay.
Bidix xagga dareenka waa in nalooxraa oo la xidhaa aduunka dareenkeena; waa inaan quudinno, ficilno, ku noolaano oo aan u dhinnaa sida xayawaannada dunidaba dareenkeenna. Laakiin waxaa jira “Aniga” oo ah kan degganaan ku sugan dareemayaasha - oo ay ku dheehan tahay dareemayaashu waxay ku xidhan yihiin dareenkooda dareenka - iyo in kasta oo dareenku yahay sayidkiisa hadda, waxaa jiri doona maalin marka “I” uu ka soo toosan doono doqonnimadiisa wuu kici doonaa oo tuuri doonaa silsiladaha caqliga. Wuxuu dhammayn doonaa muddada uu addoonsiga ku sheegan lahaa xuquuqdiisa rabbaaniga ah. Iftiiminka uu ku iftiimiyo wuxuu baabi'in doonaa awooda mugdiga wuxuuna ku faafin doonaa iftiinka dareenka ee indho tiray oo ka dhigay inuu hilmaamo asalnimadiisa. Wuxuu aamusi doonaa, hoos u dejin doonaa, edbin doonaa, oo u horumarin doonaa dareenka xagga awoodaha sare oo iyagu waxay noqon doonaan addoomadiisa u diyaarsanaanta. Markaa "Aniga" waxaan u xukumi doonaa sida boqorka rabaani ah inuu cadaalad, jacayl iyo xigmad ka sarreeyo caalamka caqliga leh.
“I” markaa waxaan ogaan doonaa dhabta gudaha iyo tan ka dambaysa dareenka, oo ah isha ilaahay ee wax kasta, oo qayb ka noqon doona joogitaanka aan la arki karin ee ah midda xaqiiqda ee wax walba - laakiin taas oo anaguna indho indhaynay dareenka, ma awoodo inay wax gartaan.
Bilowga caalamka, hal shey isku mid ah ayaa kala soocaya, iyo iyada oo loo gartay hal sifudud, laba-geesood, oo loo muujiyey sida maaddada ruux ahaanta. Laga soo bilaabo iyo sida ruux ahaanta loo abuuray dhammaan xoogagga. Sidaas ayaa u soo galay jiritaan caalami ah qaab la'aan. Intii lagu qasbay ciidamada waxay soo saaraan walxaha sida baabuurtooda. Xoog kasta wuxuu leeyahay gaadiid u dhigma. Gaadhigan ama qaybtaan ayaa ah muujinta guud ee xoogga. Waa dhinaca dambe ee xooggeeda, sida maaddada-arrinta iyo arrinta-ruuxdu ay yihiin ulaha iska soo horjeedda wixii walaxda ahaa. Dhammaan xoogagga iyo walxaha kama muuqdaan hal mar bilowga, laakiin waxay u muuqdaan sida iyo heerka ay ku soo saaraan shuruudaha muujinta. Waxaa jira toddobo ciidan, oo ay wataan gaadiidkooda u dhigma, toddobo xubnood. Kuwani waxaay ka samaysan yihiin dunidoo dhankeeda iyo soo ifbaxeeda. Zodiac wuxuu muujinayaa ku lug lahaanshahan iyo isbeddelada toddobada astaamood ee kansarka (♋︎) oo loo maro habka maktabadda (cap) illaa xiddigta (♑︎). Bilowga xilliga ugu horeeya (wareega) ee muujinta, laakiin hal xoog ayaa iskiis u muujisa iyada oo loo marayo qaybteeda gaarka ah. Qaybtan ayaa markii dambe u adeegaysa qaab loogu talagalay muujinta xoogga labaad sidoo kale leh qaybtiisa labaad. Waqti kasta (wareeg) xoog dheeraad ah iyo shey muuqda. Cilmigayaga haatan jira wuxuu soo maray seddex xilli oo waaweyn oo haatan ku jira afaraad. Jidhkeenu waa natiijada ka soo bixitaanka ciidamada iyo waxyaabaha ay ka muuqdaan ee soo ifbaxaya. Xilliga afaraad waa jihada laga leexinayo ku wareejinta isbedelka.
Ku-qasbid la'aanta walxaha, waxaa la soo saaray maydad kuwaas oo la xiriira waxyaabaha iyo waxyaabaha ay xubnahu ku shaqeeyaan. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxaa lagu xiraa jirka waxayna noqdaan dareenka jirka abaabulan. Dareenkayaga ayaa ah sawirka iyo isku-dhafka waxyaabaha kujira hal jirka. Dareen kasta wuxuu kuxiran yahay qayb gaar ah oo jirka ah taas oo ah qeybteeda iyo xaruunta gaar ah taas oo dareenku kudhaqmayo cunsurkeeda udhaxeysa taas oo sheyga uu kaga jawaabayo dareenka. Sidaas bay ku lug leeyihiin walxaha dabka, hawada, biyaha iyo dhulka; shanaadna hadda loo beddelay sida ether. Dareenka lixaad iyo kan toddobaad ayaa hadda ah, welibana waa in lagu dhex abuuraa xubnahooda u dhigma iyo xarumaha jirka. Ciidamada ka hawl gala walxaha dabka, hawada, biyaha, dhulka iyo ether-ka waa iftiin, koronto, waa biyo-aan lahayn magac cilmiyeed, magnetism, iyo cod. Dareenka ku habboon waa: aragtida (dabka), maqalka (hawada), dhadhaminta (biyo), urta (dhulka), iyo taabashada ama dareenka (ether). Xubnaha xubnaha ka ah walxahan madaxa waa isha, dhegaha, carabka, sanka iyo maqaarka ama bushimaha.
Waxyaabahan ay wataan xooggooda waa maamul, iyagu ma ahan wax qaawan. Waa la isu keenay oo la mideeyay si loo soo saaro jirka bini aadamka oo leh dareenkiisa.
Ku dhowaad nooc kasta oo xayawaan ah wuxuu leeyahay shan dareen, laakiin midkoodna ma leh heer la mid ah tan ninka. Dareenka xayawaanka waxaa xukuma oo xakameeya cunsuriyada u dhigma, laakiin nin ahaan "I" wuxuu bixiyaa iska caabin dhammaan xakameynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Dareenka xayawaanku wuxuu umuuqdaa mid ka dheereeya kuwa dadka. Tani waa sababta oo ah cunsurku ma kulmin wax mucaarad ah markay ku dhaqmayaan xayawaanku, sidaa darteed xayawaanku si dhab ah ayay u hagaan waxyaabaha. Dareenka xayawaanku si sahlan ayey uga warhayaan walxaha ay ka kooban yihiin, laakiin "I" ee ninku wuxuu su'aal ka qabaa ficilkiisa dareenkiisa asaga oo isku dayaya inuu la xiriiro naftiisa, isla markaana jahwareer muuqda ayaa ka dhashay. Sida iska caabinta yar ee “I” waxay siisaa dareenka ay isku aragto hadba sida ay run ahaantii xubnahu u hagi doonaan dareenka, laakiin haddii waxyaabaha ay ninka ku hoggaamiyaan gebi ahaanba iyada oo loo marayo caqligiisu ma yara caqli iyo masuuliyad yaraan. Sida ugu dhow ee aadanaha u nooshahay si deg deg ah ayuu u jawaabi doonaa oo waxaa lagu hagi doonaa dabeecadda dareenkiisa. In kasta oo nin horumarsan yahay uu arki karo oo maqli karo wax sii fog oo urkiisa iyo dhadhankiisu aad ayuu u fiican yahay marka loo eego khadadka dabiiciga ah, haddana ma kala saari karo farqiga u dhexeeya midabada iyo farshaxanka uu farshaxanku arko isla markaana ku qiimeeyo si muuqata, mana kala saari karo farqiga codadka iyo iswaafajinta. taas oo muusigani yaqaan uu leeyahay, isla markaana aanu lahayn dhadhankii dhadhanka ee ay soo ifbaxday ama khabiirka tijaabada shaah ka soo baxay, ama uusan awood u lahayn inuu ogaado farqiga iyo xaddiga udgoon ee uu qof ku edbin karo dareenkiisa urta.
Ninku wuxuu yeelanayaa dareen lixaad oo xayawaanka aysan lahayn. Tani waa shakhsiyadda ama dareenka akhlaaqda. Dareenka maskaxdu wuxuu bilaabaa inuu ku soo toosiyo nolosha asalka ah waxuuna noqdaa qodobka ugu muhiimsan maadaama uu ninku ku fiicnaado taranka iyo waxbarashada. Sheyga u dhigma dareenkan ninku ma fahmi karo in kastoo uu joogo, laakiin xoogga uu u adeegsado dareenka shakhsiyadda iyo akhlaaqda waa la fakaraa, waxaana loo maleynayaa in ay ku kiciso dareenka qofka "dhabta" dhabta ah. taas oo ah dareenka toddobaad, dareenka shakhsiyadda, fahamka iyo aqoonta.
Taariikhda hore ee dunideena, ku-tiirsanaanta walxaha dabeecadda iyo dhammaan xayawaannada xayawaannada ah, dib ayaa loo dhaqan geliyaa sameynta jirka bini aadamka. U kuurgalida waxyaabaha waxay ku dhamaataa dhalashada iyo abuuritaanka dareenka ayaa bilaabma. Kobcinta tartiib tartiib ah ee dareenka ee jinsiyadii hore waxaa sifiican loo baran karaa iyadoo si taxaddar leh loo fiiriyo bina aadamka, laga bilaabo dhalashada ilaa muujinta dhameystiran ee nin. Laakiin habka ugufiican uguna hubaa ee loo barto sida dareenka loo horumariyo ayaa ah in dib loogu noqdo wakhtigii caruurnimadeena isla markaana aan eegno isbeddellada qun yar ee dareenkeenna iyo habka aan u isticmaalnay.
Ilmuhu waa shay cajiib ah; dhammaan noolaha waxa ugu itaalka daran. Awoodda dhulka oo dhan waxaa loogu yeedhay inay gacan ka gaystaan ​​abuurista jidhka yar. Runtii waa sanduuqii Nuux "oo ay kujiraan labo nooc oo nolosha iyo wax kasta ah. Xayawaanka, shimbiraha, kalluunka, xamaasha, iyo miraha nolosha waxa lagu hayaa gudaha adduunka. Laakiin si ka duwan unugga kale ee xayawaanku, ilmuhu wuxuu ubaahan yahay daryeel joogto ah iyo ilaalin sanado badan, maxaa yeelay ma awoodo inuu iscaawiyo mana is caawiyo. Abuurka yar wuxuu ku dhashay dunida iyadoo aan loo adeegsan dareenkiisa; laakiin leh kuliyada samaynta lafteeda maqal imaatinka iyo dalbashada dareenka.
Markuu dhalanayo ilmuhu ma haysto wax dareenkiisa ah. Ma arki karo, waxna ma maqlo, dhadhamin karo, waxna urin karo, mana dareemo karo. Waa inay bartaan adeegsiga mid kasta oo ka mid ah dareemayaashan, oo tartiib tartiib ayey u qabataa. Dhamaan dhallaanka ma bartaan adeegsiga dareenka isku nidaam. Iyada oo maqalka qaar yimaado marka hore; dadka kale, marka hore arag. Guud ahaan, si kastaba ha noqotee, ilmuhu wuxuu u baahan yahay kaliya inuu yahay wax aan sal lahayn. Mid kasta oo ka mid ah dareenkiisa waxaa u furma sida naxdin leh, oo ay ka dhasheen aragtida ama maqalka markii ugu horreysay, oo ay keento hooyadeed ama mid jirta. Waxyaabaha la soo saaray waxaa lagu afuufay isha ilmaha, umana sinna wax u arki karaan wax si ka duwan. Codkii hooyadeed waxaa kaliya loo maqlaa sida buuq ama qaylo kale taasoo ka farxinaysa xubnaheeda maqalka. Ma awoodo inuu kala garto ur iyo dhadhamin karin. Nafaqada la qaataa waxay ka timaadaa abuuritaanka unugyada jidhka, kuwaas oo si fudud afka iyo caloosha ugu jira, isla markaana aan dareemayn karin wax sax ah midna qaybna ka ahayn jirkiisa. Marka hore gacmaheeda kuma xiri karto shay kasta, waxayna isku dayeysaa inay iskeeda ku quudiso. Taas oo aan arki karin waxaa lagu arki doonaa karti darradeedii ay ugu jeedin lahayd indhaheeda wax walboo la siiyay. Hooyadu waa inay bartaa inay aragto oo maqasho, maadaama ay barato inay nafaqo hesho. Erayada iyo dhaqdhaqaaqyada soo noqnoqda waxay isku dayaan inay soo jiidato dareenkeeda. Samirku wuxuu hooyadu eegtaa indhihiisa murugada leh si ay u eegto aqoonsi, usbuucyo ama bilona waa ka hormaraan qalbigeeda farxad farxadeed oo qosol leh. Markay tahay markii ugu horraysa ee ay garto dhawaaqa waxay si dhaqso leh u dhaqdhaqaajisaa addimmadeeda, laakiin ma awoodo inay raadiso dhawaaqa. Badanaa meesha dhawaaqa ay ku dhacdo dareenka aragtida markii wax xoogaa dhalaalaya la dhaqaajiyo indhahayaga ka hor ama dareenkiisa soo jiidashada shay. Indhaha-indheynta taxaddarka leh ee raacday horumarka ilmo kasta ma ku guul darreysto inuu garto ficilladiisa markii labadaas dareen midkood loo isticmaalo si habboon. Haddii dhawaaqa loo isticmaalo marka la hadlayo uu yahay mid khafiif ah oo farxad leh wuu dhoola caddayn doonaa, haddii uu xanaaq badan yahay oo xanaaq badanna wuu ku qaylin doonaa cabsi. Waqtiga ay marka ugu horeysa aragto shay waxaa lagu garan karaa muuqaalka u dhigma ee aqoonsiga kaas oo sheyga farax gelinayo. Waqtigaan indhaha waxaa loo arki doonaa inay sifiican diiradda u saarayaan; waqtiyada kale marka laga eego markay indhuhu indhaha ka baxayaan. Waxaan ka tijaabin karnaa canugga inuu ku arko iyo maqlayo mid ka mid ah alaabta caruurtu ku cayaarto, oo ah qaanso. Haddii aan ruxno shanqarta oo ilmuhu maqlo laakiin aanu arkin, wuxuu gacmahiisa u kala fidi doonaa jiho kasta oo si xoog ah ayuu u duulayaa, taasoo laga yaabo inay ku socoto ama jihada jihada. Tani waxay kuxirantahay awooda ay u leedahay helida dhawaaqa. Haddii ay aragto shanqarta waxay markiiba diiradda saari doontaa indhihiisa qaanadaha oo way gaari doontaa. Taasi inay aragto ama aysan arkin waxaa lagu caddeeyaa iyadoo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib u muuqata looga ay uga baxdo indhaha. Hadduusan arkin, indhuhu waxay soo bandhigayaan muuqaal madhan. Laakiin hadday aragto way beddeli doonaan diiradooda iyadoo loo eegayo ku dhawaanshaha ama masaafada u jirta tuullada.
Dhadhaminta waa dareenka xiga ee la soo saaray. Marka hore cunugu ma awoodo inuu muujiyo doorbidkiisa biyaha ama caanaha ama sonkorta ama cunnooyinka kale ee aan runtii xanaaqaynin ama niyad jabin unugyada jirka. Way wada qaadan doontaa cuntada oo dhan, laakiin waqti ka dib waxay muujineysaa doorbidida midba midka kale iyadoo la ooyayo marka cunnada gaarka ah si lama filaan ah looga baxo. Markaa, tusaale ahaan, haddii gabal nacnac afkeeda la dhigo way ooyi doontaa haddii nacnaca meesha laga saaro oo aanu ku qancin doonin ibta ama caano. Laakiin feejignaanteeda waa laga saari karaa dareenkeeda dhadhanka iyadoo la ruxruxo ama ku dheelista shay dhalaalaya indhaha hortiisa. Dareenka urta ayaa lagu ogaadaa indha indheeyaha isagoo soo bandhigaya ur qaar ka mid ah, doorbididaas oo lagu tusi doono dhoolla caddeyn, baraf, ama cunugga qabow.
Dareemidda ayaa loo horumariyaa si tartiib tartiib ah iyadoo loo eegayo dareenka kale. Laakiin ilmuhu weli ma uusan baran qiimaha masaafada. Waxay gaari doontaa dayaxa ama wareega geedka oo leh kalsooni badan sida ay u gaari doonto sanka hooyadeed, ama gadhka aabihiis. Marar badan waxay qaylin doontaa maxaa yeelay ma buuxsami karo dayaxa ama wax fog; laakiin tartiib tartiib waxay barataa qiimaha masaafada. Si kastaba ha noqotee, si dhaqso leh uma baran barashada sida loo isticmaalo xubnaheeda, maxaa yeelay waxay isku dayi doontaa inay ku quudato cagihiisa ama jeexjeexyada ama wixii toy ah. Ma aha ilaa sanado badan ay ka soo wareegto waxay joojin doontaa iskudayada inay wax walba afkeeda geliso.
Dareenka ayaa ku jira nolosha hore ee ay xakameeyaan walxaha sidoo kale xayawaanka. Laakiin da 'yarta hore caqligu dhab ahaan looma horumarin; waayo, in kasta oo ay jiraan cudur-daarmo ka reeban xeerka caadiga ah, haddana dareenku ma bilaabayo in si sir ah loo isticmaalo illaa da'da qaan-gaarka; ka dib wuxuu bilaabaa isticmaalka dhabta ah ee dareenka. Markaa markaa waa in dareenka akhlaaqda, dareenka shakhsigu uu bilaabmaa, dhammaan dareenka ayaa qaadanaya macno ka duwan marxaladan horumarkooda.
Maaddaama ay jiraan quwado ka dhex shaqeeya gawaaridooda, waxyaabaha ay ka kooban yihiin, sidoo kale waxaa jira mabaadi 'ku xiran kuna hawl gala dareenka iyo xubnahooda. Bilowgii qaybtii koowaad waxay ahayd dab, xooggii ugu horreeyay ee muujiya wuxuu ahaa iftiin kaas oo ka shaqeynayay gaarigiisa iyo cunsurka, dabka. Bilowga binu aadamka, iftiinka sidii dab ka jira adduunka oo dhan waa maskaxda, taas oo, in kasta oo bilowgiisu uu yahay qaabkii ugu horreeyay, haddana waxaa ku jira jeermisyada wax kasta oo la horumarin karo sidoo kalena xad u leh horumarkiisa . Dareenkiisu waa aragga xubnaheeduna waa isha, taas oo iyaduna calaamad u ah.
Kadibna howlgalka xoogga, korantada, wuxuu maraa qaybtiisa hawada. Ragga gudaheeda mabda'a u dhiganta ayaa ah nolosha (prana), oo leh dareen maqal ah, dhegtuna waa unuggeeda. Awoodda “biyuhu” waxay ku shaqeysaa biyaha xubnaheeda, waxayna u leedahay isbarbardhig ahaan mabda'a qaab ahaan (jirka astral ama linga sharira), dareenkeeda, dhadhanka, iyo xubnaheeda carrabka.
Awoodda magnetismku waxay ku shaqeysaa dhulka aasaasiga ah, waxayna leedahay mabda'a u dhiganta iyo dareenka ninka, galmada (jirka, sthula sharira) iyo urinta, sanka oo ah xubintiisa.
Awoodda codku waxay ku dhaqaaqdaa baabuurkeeda ether. Qofka dhexdiisa mabda'a u dhigma waa rabitaan (kama) iyo dareenkiisa, oo maqaarka iyo dibnaha ay u yihiin xubno. Shantaas dareen waxay caan ku yihiin xayawaan iyo ninba, laakiin heerar kaladuwan.
Dareenka lixaad waa dareenka oo xayawaanku ka duwanaado aadanaha. Dareenka wuxuu ku bilaabmayaa, ha ahaado cunug ama nin, iyadoo la adeegsanayo dareenka 'Am-ness'. Ilmaha waxaa lagu muujiyaa marka ilmuhu noqdo waxa loogu yeero "is-ogaansho." Ilmaha dabiiciga ah, sida xayawaanka dabiiciga ah ama ninka dabiiciga ahi, waa mid aan ku qaddarin habdhaqankiisa, oo aan cabsi iyo kalsooni ku qabin dhaqankiisa. Isla markii ay ogaato lafteeda, si kastaba ha noqotee, waxay luminaysaa jawaab celinta dabiiciga ah ee dareenka waxyaabaha ka baxsan, waxayna dareemeysaa inay xakameyso dareenkeeda I.
Dib u milicsiga wixii hore, qofka weyni ma xasuusto xanuunno iyo dhalooyin badan oo jiritaanka aniga aan u geeyay dareenkiisa. Markii aad ogaatid in aan nafteyda ahay, xanuun badan ayaa ay ugu keeni doontaa ururka xasaasiga ah. Tan waxaa si gaar ah u muujiyey wiilka ama gabadha oo keliya markay gaaraan qaan-gaarka. Markaa dareenka lixaad, akhlaaqda ama dareenka shakhsiyadda, waa laga saarayaa maxaa yeelay aniga ayaa markaa sifiican ugu xidhan jidhka marka loo eego sidii hore. Waa markan in mabda'a fikirku ku dhaqmo dareenkiisa, dareenka akhlaaqda ama shakhsiyan. Dareenkan shakhsiyaddu waa ka turjumaadda I, maaskaro I, aftahanimada beenta ah. Aniga ayaa ah shaqsiyanka ama mabda'a maskaxda kaamil ah, oo u dhiganta dadaalka bilowga ah ee maanka si loo muujiyo naftiisa iyada oo loo marayo dareenkiisa koowaad, midka aragtida, xoogga la midka ah ee iftiinka iyo dabeysha sheeda.
Caqligu wuxuu ka socdaa zodiac. Haddii dhexroor laga soo qaado astaamaha kansarka (♋︎) ilaa loo yaqaan 'capricorn (the), indhaha madaxa madaxa waxay ku jiraan xariiq safka sare ee zodiac-ka oo u kala qeybiya qaybaha hoose iyo sare. Qaybta sare ee zodiac ama madaxa waa mid aan la muujin, halka qeybta hoose ee zodiac ama madaxa ay tahay mid muuqata iyo soocid leh. Qaybtaan hoose ee muuqashada waxaa ku jira toddobo furitaan, oo tilmaamaya toddobo xarumood, laakiin xilligan xaadirka ah keliya shan dareen ayaa shaqeynaya.
Mabaadi'da ay soo qortay Mme. Blavatsky ee cilmiga fiisigiska waa, jirka jirka (sthula sharira), jirka astral (linga sharira), mabda'a nolosha (prana), mabda'a rabitaanka (kama), maskaxda (manas). Mabda'a maskaxda (manas) waxaa iska leh Mme. Blavatsky wuxuu yiri inay noqoto mabda'a shaqsiyanka ah, taas oo ah mida kaliya ee ay xustay iyada oo ah weligeed, iyo mabda'a kaliya ee nafsada ah ee isku muujiyay nin. Mabaadi'da ugu sareysa wali muu muuqan, sidaa darteedna waxay u taagan yihiin qaybta sare ee zodiac; laakiin madaama mabda'a maskaxdu ay tahay waxa ka muuqda caalamka iyo dadka, calaamadaha zodiac-ka ayaa muujinaya qaabka mabda'a loo horumariyo iyada oo lala xiriirinayo mabaadi'da ku-meel-gaarka ah, ee nidaamka dabiiciga ah ee ka-go'naanshaha abuurista. Sidaas awgeed, tusaale ahaan, neefta ugu horreysa ee maskaxda, kansarka (♋︎), waxay miro dhalisaa jeermiga nolosha, leo (♌︎), oo si tartiib tartiib ah u kobcaysa qaab, virgo (♍︎), iyo qaabkee ayaa lagu go'aamiyaa jinsi ahaan iyo dhalashadiisa, maktabadda (♎︎). Jinsigiisa waxaa lagu muujiyaa horumarinta mabda'a rabitaanka, scorpio (♏︎). Halkan waxaa ku dhammaanaya ninka jirkiisa xoolaha ah oo keliya. Laakiin waxaa jira dareemayaal gudaha ah, sida clairvoyance iyo clairaudience, oo u dhigma aragtida iyo maqalka. Kuwani, oo leh awooda maskaxda, waxay leeyihiin xubnahooda iyo xarumaha waxqabadka ee qeybta sare ee madaxa. Maskaxda iyo awooddeeda waa in la edbiyaa oo la hormariyaa ka hor inta mabaadi'da sare (atma iyo buddhi) ay noqon firfircoonaan.
Binu’aadamka wuxuu ku bilaabmaa dareenka lixaad ee shakhsiyadda iyo damiirka oo hagida ama hagida fikirka, sagittary (♐︎). Maaddaama fikirku noqdo mid daciif ah, oo dareenka loo adeegsado howlahooda saxda ah isla markaana loo adeegsado adeegsiga saxda ah, fikirka shaqsiyan iyo milicsiga I waa la waafajinayaa sida dhabta ah ee aan tahay, shaqsiyadda ama maskaxda, taas oo ah dhameystirka dareenka adigoo ku dhawaaqaya ficil awooda sare ee maskaxda. Jirka kaasoo shaqsiyaddiisa lagu muujiyo iyo kaasoo dareenka damiirkiisu ka soo muuqdo qaab dhismeedkaan oo ay matalaan jirka. Unugga matalaya shaqsiyan, qafis (ric) waa qanjidhada tineerka. Sida xubin unug jirka waxaa loo dhigayaa gadaal iyo bartamaha dhexdooda. Cudurka qanjirka 'pineal' waa waxyar gadaal iyo gadaashiisa. Indhuhu waxay astaan ​​u yihiin labadan xubnood ee gadaashooda ka taagan.
Dareenka noocan ah annaga oo ku dhex shaqeyneyna xarumaha ama xubnaha madaxa ma aha shilal kaliya, ama fursad — isbeddel deegaan. Labadooduba waa labadaba helitaanka iyo saldhigyada hawlgalka ee fikirka, ninku, wuxuu heli karaa tilmaam, iyo xakameyn karaa ama hagi karaa awoodaha iyo waxyaabaha dabeecadda. Mana aha in loo maleeyo in calaamadaha zodiacku ay yihiin magacyo aan sharciga waafaqsanayn oo loo yaqaan xiddigaha qaarkood ee samooyinka. Xiddigaha samada ee samooyinka waa astaamo iyo sidoo kale meerayaashayada. Calaamadaha zodiac-gu waxay matalaan fasallo aad u badan ama amarro. Madaxa fasalka kasta ama amar kasta waa sirdoon aad u muqadas ah oo aan sameyn karin wax intaa ka badan oo aan annaga noo sheegno. Mid kasta oo ka mid ah sirdoonka weyn sida si tartiib tartiib ah uga socda qaab isku xigxigsan dhammaan xoogagga iyo walxaha sameeya jirka jirka, mid walbana wuxuu leeyahay xiriirkiisa jirka ee jirka sida la sheegay.
Dareenka ayaa ka duwan kan dhabta ah aniga oo aan lagu aqoonsan karin. Sida aan ula xidhiidho jirka, dareenka ayaa qalqal galiya, way isqariyaan, wey iska indhatiraan oo waxay ku tuuraan himilo sixir ah hareeraha taas oo aan sifiican looga adkaan karin. Aniga ma ahan inaan dareemo dareemada; waa wax aan la fahmi karin oo aan la dafiri karin. Maaddaama ay dunida ku soo biirto oo ay la xiriirto dareenka waxay isku tilmaamaysaa qaar ama dhammaanba dareemayaasha, maxaa yeelay waxay ku jirtaa adduunka muuqaalka jirka ee qaababka aysan jirin wax is xasuusinaya, mana ahan illaa iyo waqti dheer kadib. silica iyo safarro badan oo ay bilaabeen inay isu aqoonsadaan inay kaga duwan yihiin dareenka. Laakiin dadaalkeeda si ay u kala soocaan waxa ay marka hore noqotaa mid aad u xiise badan oo khiyaanayn.
Xaaladda ilmaha ama tii hore waxay lahayd adeegsiga dabiiciga ah ee dareenka, laakiin iyada oo aan sidan lafteeda ma garto. Iyada oo loo marayo beeritaanka iyo waxbarashada dareenka ayaa loo keenay heer sare oo horumar ah. Tani waxaa matalaya laamaha kala duwan ee fanka. Sida, tusaale ahaan, sculptor-ka si cad ayuu uraysan karaa qaab iyo saami iyo wuxuu qaabeysanayaa dhoobada caagga ah ama wuxuu galiyaa marble adag qaabab u eg quruxda uu maanka ku heysto. Farshaxanimada leh dareenka midabku wuxuu tababartaa indhihiisa si ay u arkaan iyo mabda 'ahaan fikirkiisa si ay uraystaan ​​quruxda kaliya qaab ahaan laakiin midab ahaan. Wuxuu ogaadaa kaladuwanaanshaha midabada iyo codadka midabka oo uusan qofka caadiga ahi uusan xitaa uuraysannin, oo qofka da'da ah ama cunuggu wuxuu u arkaa uun midab kala duwanaansho marka loo barbar dhigo burburka kale. Xitaa ninka waxbarashada caadiga ah ee eegaya wejiga wuxuu u arkaa kaliya dusha, wuxuuna helayaa aragtida guud ee midabka iyo astaamaha. Kormeer dhow wuxuu ka arkaa waxa uusan u magacaabi karin inuu yahay midab gaar ah oo midab leh; laakiin farshaxanku kaliya ma ahan oo keliya inuu helo muuqaal guud oo midab ah, laakiin wuxuu ku baari karaa inuu ku ogaado midabyo badan oo midab maqaarka ah kuwaasoo aan xitaa looga shakisanayn inuu joogo ninka caadiga ah. Quruxda muuqaalka muuqaalka ama muuqaalka ay dileen farshaxan yahanku kuma qiimeeyo ninka caadiga ah, waxaana loo arkaa kaliya inuu yahay wiil ama cunug hore. Xayawaanku midkoodna tixgelin kuma laha midabka, ama haddii kale iyadu kaliya way ku faraxsan tahay. Cunuga ama ninka hore waa in loo tababaraa si taxadar leh si uu u fahmo fikradaha midabada midabka iyo aragtida sawirka. Marka hore rinjiyeynta ayaa u muuqda kaliya dusha sare oo khafiif ah ama mugdi ah qaybo gaar ah, laakiin si tartiib tartiib ah maskaxda ayaa uga mahadcelineysa dusha sare iyo asalka waxyaabaha iyo jawiga dhexgalka, iyo sida ay u baraneyso in loo qiimeeyo midabka dunidu u muuqato mid ka duwan tii hore. . Cunugga ama ninki hore wuxuu kaliya ku gartaa dhawaaqa dareenka ama shucuurta ay soo saarto. Ka dib waxay kala soocaysaa sanqadha kala goynta iyo cod yar oo fudud. Xilli dambe waxaa loo tababari karaa in ay qadariso dhawaaqyada murugsan, laakiin kaliya muusigga muusigga ah ayaa awood u leh in uu kala garto oo ka mahadnaqo is-afgaranwaaga ka dhex jira heesaha weyn.
Laakiin iftiinka ka dhalanaya abuuritaanka dareenka ayaa aad ugu xidhmaya xitaa dareenka, kana dhiga isaga mid addoomo ah kan hadda ka hor. Addoonkooda addeecsan ee jaahilnimada, wuxuu noqdaa addoonkooda aaminka ah ee dhaqanka, in kasta oo xagga aqoonta iyo dhaqanka uu ku wajahan yahay waqtiga soo jeedinta.
Mid kasta oo ka mid ah shanta dareen waa mid sarreeya ama hooseeya marka loo eego adeegsiga ay u samayso shakhsiyadda qofka. Ilbaxnimada iyo waxbarashaduba waxay kuxiran yihiin I dareenka illaa iyo inta aniga iyo sababaha macquulka ah lagu dabaqi doono dhamaadka waxyaalaha iyo aniga oo aan ku tiirsanahay adduunka iyo waxa khaladka ay ugu fikirto inuu yahay hantidiisa. Guuldarrooyinka, saboolnimada, xanuunka, xanuunka, murugada, dhibaatooyinka nooc kasta leh, waxaan gadaal uga tuuraa lafteeda oo ka fog kuwa ka soo horjeedda kuwaas oo soo jiidanaya oo khiyaanaynaya I. Markaan xoog badnaado waxay bilaabayaan inay nafteeda ka doodo. Markaa waa suurtagal inay bartaan macnaha iyo isticmaalka dhabta ah ee dareenka. Markaa waxay gartaa inuusan ahayn dunidan, inay tahay farriin la diray howl adduun. Taas ka hor inta ay bixin karin fariinteeda oo ay gudato howsheeda waa inay noqotaa mid lagu yaqaan dareenka sida ay run ahaantii yihiin, oo u adeegso sidii loogu adeegsan lahaa halkii laga khiyaameyn lahaa oo lagu xakameyn lahaa.
Waxaan baranayaa in caqligu runtii yahay turjubaannada adduunka, waana aniga, iyo sida oo kale in la siiyo dhagaystayaal, laakiin waa inaan i bartaa afkooda tarjumaadda, oo aan u isticmaalaa sida. Halkii laga khiyaameyn lahaa saameyntooda, waxaan bartay in kaliya iyadoo la xakameynayo dareenka ay awood u leedahay inay ku tarjunto adduunka oo dhan, iyo in xakamaynteeda, aniga, aan, uu gudanayo waajibaad isagoo siinaya foomka kuwa aan buuxin iyo ka caawinta arrimaha ku saabsan geedi socodka qasabka ah iyo geedi socodka isbeddelka. Markaa waxaan sii baranayaa in waxyaabaha ka dambeeya oo ka sarreeya waxyaabaha uu kaga hadlayo dareenkiisa ay jiraan wax garasho iyo tilmaamo ay ku wada xidhiidhi karaan awoodaha cusub iyo kuwa aan la adeegsan ee u soo galay jiritaanka isla markaana ku helay isticmaalka habboon iyo xakameynta jidhkiisa dareenka. Sida awoodaha sare (sida aragtida iyo kalasooca) ay u horumarsan yihiin waxay ka ciyaarayaan meesha dareenka jirka.
Laakiin sideen ku ogaan karaa aniga oo is gartay? Geedi socodka taas lagu samayn karo waa mid si sahlan loo sheegay, in kasta oo qaar badan laga yaabo inay ku adkaato dhammaystirka. Hawshu waa geedi socod maskaxeed, waana geedi socodka baabi'inta. Waxaa suuragal ah in aan mar qudha la qaban, in kasta oo ay macquul tahay haddii dadaallada la sii wado.
Qofka ku guuleysta ciribtirka dareenka ha loo fadhiisto aamusnaan oo indhihiisu xir. Markiiba waxaa qalbigiisa ku soo dhici doona fikradaha wax kasta oo la xiriira dareenka. U ogolow inuu si fudud u bilaabo ciribtirka mid ka mid ah dareenka, dheh urta. Ka dib ha ka gooyo dareenka dhadhanka, si uusan uga warqabin wax kasta oo uu urta ama u uri kara. U oggolow inuu sii wado isagoo tirtiraya dareenka aragtida, taas micnaheedu waa inuusan ku baraarugsan doonin fikirka wax kasta oo qaab ama midab ah. U oggolow inuu sii fogeeyo dareenka maqalka, si uusan uga warqabin buuq ama sanqadha, xitaa dhegaha dhegta, ama wareegga dhiigga ee ku dhaca jidhka. U oggolow inuu sii wado isaga oo tirtiraya dhammaan dareenka dareenka si uusan jidhkiisa uga warqabin. Waa la uuraysan doonaa hadda oo aan nal lahayn ama midab lahayn oo aan innaba lagu arag wax cirka ku jira oo dhan, in dareenka dhadhanka uu lumay, dareenka urka ayaa lumay, in wax aan adduunka lagu maqli karin, iyo in ay jiraan wax dareen ah maleh.
Waxaa la dhihi doonaa qofkii laga jaro dareemayaasha aragga, maqalka, dhadhaminta, urka iyo dareemidda ma laha jiritaan, inuu dhintay. Tani waa run. Daqiiqadaas wuu dhintay, mana jiro, laakiin meeshii ex-istiin la'aan wuxuu leeyahay Ahaanshaha, iyo halkii uu ka heli lahaa nolol dareen leh, isagu waa IS.
Waxa feejignaanta ka dib marka dareenka la ciribtiro waa I. Waqtigaas kooban ee waqtigaas dadku wuxuu ku ifin doonaa Fahanka. Wuxuu aqoon u leeyahay aniga sida aniga, oo ka duwan dareemayaasha. Tani muddo dheer ma sii socon doonto. Isagu mar labaad ayuu ku noqon doonaa garaadka, dareenka, xagga dareenka, laakiin wuu ku ogaan doonaa waxay yihiin, oo wuxuu ku qaadan doonaa xusuusta jiritaanka dhabta ah ee isaga la jira. Ka dib wuu la shaqeyn karaa oo wuxuu ka dhex shaqeeyaa dareenka waqtiga uusan sii ahaan doonin addoonkooda, laakiin wuxuu ahaan doonaa mid waligiis isagu iskiis u ahaan doona, had iyo jeer waxaan ahaan doonaa xiriirka saxda ah ee dareenka.
Qofka ka baqa geerida iyo geerida geeridu waa inuusan ku lug yeelan dhaqankan. Waa inuu waxoogaa bartaa nooca dhimashada iyo geedi socodkiisa maskaxeed intaanan raadsan I.